IMicrosoft iqinisekisa ukuthi iWindows evulekile iyatholakala | Kusuka kuLinux
Mthandeni_SA | | KusukaLinux, I-GNU / Linux
Ukucabanga ngezibuyekezo zamahhala zenguqulo entsha yeWindows - kubasebenzisi bamakhophi asemthethweni nabhalisiwe, kunjalo - bekungenakwenzeka kuze kube muva nje. Kunzima ukukholwa namanje yilokho inkampani efana neMicrosoft, ehlala ikakhulukazi kwisoftware yayo, icabanga ukwethula uhlobo lomthombo ovulekile weWindows.
Ngenxa yobuholi bukaSatya Nadella kule nkampani ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bayamvumela inkampani ivuselela futhi ivumelane nesikhathi esizithola sikuso. UMark Russinovich, ongomunye wonjiniyela bawo abakhulu futhi obambe iqhaza kwinqubo yokuthuthukiswa kwesoftware, uphawula ngokutholakala komthombo ovulekile weWindows: “Kungenzeka impela. I-Microsoft entsha ”.
Ngesikhathi somhlangano weChefConf, wamakhulu abasebenzisi abebekhona, munye kuphela owathi usebenzisa iWindows operating system nsuku zonke. Bonke abanye abantu abakhona basebenzise enye indlela efana neLinux. Sekuyiminyaka eminingi iMicrosoft ibhalwe ukuthi isitha somthombo ovulekile futhi manje basebenzela ukuqeda lelo dumela nesithombe. URussinovich uchaze ukuthi esinye sezithiyo ezinkulu abanazo, lapho beya kuMthombo Ovulekile, ukuthi bafuna uhlelo lube lula ukusungulwa ngabahleli bohlelo.
UMark Russinovich. Isithombe: Josh Valcarcel / WIRED
Njengamanje, iMicrosoft yenze imithombo ethile yezinhlelo zokusebenza ezivulekile, ngoba inikeza izinzuzo ezinkulu. IWindows cishe izothatha isikhathi eside, kepha bathi izingxoxo seziqhubeka ngalesi sihloko.
Isikhathi sokulungiselela ushintsho oluzayo, noma ngabe sineMicrosoft.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » KusukaLinux » IMicrosoft ithi iWindows open source kungenzeka
Kimina lokhu akuyona into edlula isu elisha lebhizinisi. Ngabe uhlela ukwethula i-OS ekhokhelwayo neyamahhala? Uma ucabanga ukuthi i-OS ibimahhala, besizokwenzenjani ukufaka iHhovisi, elibiza kakhulu, noma enye isoftware? Angikholwa noma yini enkampanini indlela yayo yezohwebo eyeyokuzibusa nokuthi ithengise izimpahla zayo ngentengo yegolide. Ngandlela thile, into ebakhuthazayo ukuthunjwa kwedola.
Mayelana nokufaka iHhovisi noma isoftware ekhokhelwayo, okujwayelekile, "ukugenca" Ngokuqondene nezinhloso, kucacile, gwema ngazo zonke izindlela ukunwetshwa kwe-GNU / Linux.
Into eyodwa nje, mahhala akusho ukuthi kukhululekile.
Isigodlo i-Isaac kusho
"Uhlela ukwethula i-OS ekhokhelwayo neyamahhala?"
Ukukhululeka akusho ukuthi kukhululekile ...
Phendula u-Isaac Palacio
Iphutha elikhulu labaningi emphakathini ukukholwa ukuthi iFree = Free, kanti akunjalo. Uma kungenjalo, buza iRed Hat neNovell ngemali engenayo abanayo neRHEL neSuse Enterprise.
Awudingi ukufaka iHhovisi, kufanele nje uthuthele kwisoftware yamahhala. ILebre Office ikufezekisa lokho, kumahhala, kumahhala futhi kuhambisana ngokuphelele nakho konke okuyiHhovisi. Angiyethembi i-MS uma kukhulunywa ngeSoftware Yamahhala, kepha kufanele kuthiwe iMicrosoft, ngenxa ye-spyware yayo efakwe ku-Windows 7, 8 nangaphezulu kakhulu ku-Win 10, izithole ngokwesaba izindaba zenombolo ethusayo yamahhala izinhlelo ezisebenza ezinhlelweni zazo zokusebenza. Okukhulu nokukhathazeka kakhulu yiFirefox, okuyisibonakaliso se-Free-platform Free Software. Ngakho-ke, iBlender yemidwebo engu-3d, iMixx yezingxube ze-DJ, neVLC, isidlali sevidiyo esingenakuqhathaniswa phakathi kwezinye izinhlelo eziningi zamahhala, ihlasela amaWindows PCs, okwenza abantu baseRedmond babone ukukhathazeka kwebhizinisi labo nendlela yabo yokuwina isongelwa imali indlela enkulu.
Ngicabanga ukuthi thina esisebenzisa i-linux asinantshisekelo noma sinentshisekelo yokusebenzisa isoftware yamahhala evela ku-microsoft ngoba i-linux uhlelo oluqinile nefasitela, uma ingumthombo ovulekile, kuzofanele iqale phansi ukuze ifinyelele ezingeni lelo linux has
Singabiza iMicrosoft ngokuthi "phansi komhosha" abashayi enye yezinhlekelele eziningi enye yazo ukuthengwa kweNokia. Bangabanye balabo abafuna ukudoba ngaphandle kokuhlanganisa ingwegwe bakhetha ukusayinisa inhlanzi ukuze banga chitha ekulobeni. Isoftware yamahhala yilokho abakwenze okuncane uma into abafuna ukusondela kwiLinux izoba mubi
Kimi bacabanga kuphela "NGOKUTHUTHUKISA ISITHOMBE" nokuheha amaklayenti amasha, abantu abasebenzisa iLinux noma abasuke kude neWindows futhi bamise ukufuduka kwezinkampani kukhulule isoftware, yabo bonke ibhizinisi. Angikholwa okwamanje ukuthi banezinhloso zeWindows opensource noma yamahhala, inkulumo-ze emsulwa ngiyingelosi futhi ngiyayithanda iLinux.
Vele kungenzeka ... ilogo yoBuntu iyasuswa futhi iwindi liyashintshwa
UJuan Akekho kusho
Angicabangi ukuthi ngizimisele ngisho nokwenza ngcono isithombe, iWindows ibilokhu isebenzisa inqubo ye- «waporware» iminyaka ukunquma ukwethulwa kwemikhiqizo esincintisana nayo, ukubeka umsindo nokunye, futhi ngicabanga lesi sinyathelo esisodwa kuleyo ndlela bememezela izinto abangayi kuzo nokuthi ezimeni eziningi abahlose ukuqhubeka nazo.
Ngabe ukhona ocabanga ngokungathi sína ngamafasitela amahhala (noma ngabe awamahhala) ongabona kuwo isibindi bese uhlola ngempela "ukuqina" kwawo, "ukucaca" kwawo, "inhlanzeko" yawo, "ukusebenza kwawo kahle" nezinye izici?
Phendula uJuan Akekho
Ngincoma ukuthi ufunde incazelo ye- "Vaporware" ku-Wikipedia, isibonelo. Kuyafundisa futhi kusiza ukwazi iMicrosoft kangcono, ukuthi kunabantu ababonakala bezalwe izolo. Ngibona uhhafu.
Angikholwa lutho futhi angifuni lokho kwenzeke
Ukufakwa nokumiswa kwe-WordPress 4.5 Multisite ku-Debian Jessie